खानेपानीको संकट : पानीको जोहो गर्न कुवामा चाबी ! – Rajdhani Daily
खानेपानीको संकट : पानीको जोहो गर्न कुवामा चाबी !
भोजपुर । वर्षेनी खानेपानी संकटले थलिने दुर्गम ग्रामिण भेगमध्ये एक गाउँ हो, रामप्रसाद राई गाउँपालिका ५ मानेभञ्ज्याङको रानागाउँ । यो गाउँमा खानेपानीको श्रोत भन्नु एउटै मात्र सार्वजनिक कुवा छ । गाउँका अन्य दर्जनौ कुवाहरु सुकिसकेका छन् । अचम्मको प्रसंग, यो कुवामा रातदिन नै ताल्चा लगाइन्छ ।
कुवामा ताल्चा लगाउनु गाउँबासीका लागि कुनै नौलो कुरा होइन । हिउँदे खडेरी सुरु भएसंगै खानेपानीको जोहो गर्न रानागाउँबासी कुवामा ताल्चा लगाउने गरेका छन् । खानेपानीको संकट खपिरहेको बेला खानेपानीको नाममा गाउँमा एउटा मात्रै कुवाको पानी बाँडिचुँडी चलाउन कुवामा ताल्चा लगाइएको हो । रानागाउँका करिब १६ घरपरिवारलाई उक्त कुवाको पानीले बिहानबेलुका जेनतेन २÷२ गाग्री खानेपानी पुग्ने गर्छ ।
सुख्खाका बेला कुवामा लापारबाही ढंगबाट खानेपानीको उपभोग हुने भएकाले मुहान नरित्तियोस् भनेर कुवामा ताल्चा लगाउने गरेको स्थानिय रमिला रानामगरले बताईन् । ‘गाउँमा बर्षैपिच्छे खानेपानीको महामारी हुन्छ । सबैलाई भने जति खानेपानी पुग्दैन ।’ उनले सुनाइन्, ‘एकचोटीमा सबैलाई २ गाग्रीमात्रै खानेपानी उघाउन पुग्छ । त्यसपछि कुवाको पानी रितिन्छ । फेरि जमाउनै प¥यो नत्र विहान र बेलुकी चुल्हो खाना पाक्दैन ।’
२ वर्षअघिसम्म आसपासका ओडारे, जुकेपानी, अगौटे, लट्रीडाँडा टोलका गाउँलेलाई पनि यहि कुवाको पानीले मनग्गे पुग्थ्यो । वल्लोपल्लो गाउँका बस्तुभाउलाई खुवाउन कुनै समस्या थिएन । तर पछि सुख्खाले मुहान सुक्दै गएसंगै कुवामा रातीराती जथाभाबी पानी लान थालेपछि गाउँले सबै मिलेर कुवामा ताल्चा लगाउन थालेको अर्का स्थानिय जित बहादुर क्याप्छाकीमगरले सुनाए । भन्छन्, ‘पहिले यहि कुवाको पानीले सबैलाई मनग्गे पुग्थ्यो । पछि मुहानहरु सुक्न थालेपछि अन्य गाउँका मानिसहरु रातारात आएर पानी लाने, जाँदा कुवामा पानी नहुने, जथाभावी बस्तुभाउलाई पानी खुवाउन थालेपछि ताल्चा लगाउन थाल्यौँ ।’ जित बहादुरका अनुसार कुवामा बिहान ५ बजे र बेलुकी ६ बजे दिनको दुईपटक खुला हुन्छ । गाउँका १६ घरलाई बराबरी बाँडेपछि पुनः ताला लगाईने गरेका मगरको भनाई छ ।
खानेपानीका कारण धेरैजसो गाउँलेको दैनिकी पानी जोहो गर्नमै बित्छ । एकातिर कुवाबाट मानिसलाई खानेपानी जोहो गर्न कठिन छ अर्कोतिर बस्तुभाउ, चौपायालाई पानी पु¥याउन अत्यन्तै समस्या छ । मानिसलाई खाना पकाउन पर्याप्त पानी नभएकाबेला बस्तुभाउलाई बेसी खेततिर वा थोरै बस्तुभाउ मात्र पाल्ने गरेको स्थानिय कृष्णकुमारी रानामगरले सुनाइन् । उनले खानेपानीको चरम संकटकै कारण घरपाल्तु चौपायापंक्षीहरु थप जोखिममा परेको बताइन् ।
खानेपानी अभावकै कारण बस्तुभाउ पाल्ने रानागाउँका धेरैजसो बेसी सिक्तेलपिखुवा खोलातिर बसाई सरेका छन् । रानागाउँ आसपासका ओडारे, लट्रीडाँडा, जुकेपानीमा जम्मा दर्जनौ कुवामध्ये ओडारे गाउँका सबै कुवा सु्किसकेको छ । जुकेपानी टोलको कुवामा १० घरधुरीलाई दैनिक डेढ गाग्री जति खानेपानी पुग्छ ।
५१७ घरधुरी मानेभञ्ज्याङबासीले बर्षेनी खानेपानीको संकट भोग्नु परेको छ । मानेभञ्ज्याङका अर्चले, भोर्लेनी, आमबोटे, गडा, अगौटे, रानागाउँ, गुँरासे लगायत स्थानहरु सुख्खा र खानेपानी संकटग्रस्त क्षेत्र हुन् । सुख्खाका कारण अर्चले, भोर्लेनी र अगौटेका करिब ५६ घरधुरी बस्तीहरु गाउँबाट विस्थापित भईसकेका छन् भने कतिपय घरधुरी विस्थापित हुने अवस्थामा छन् ।